Nuqul Smart ah: codsi siinaya xulashooyin dheeri ah Nuqul / Taabasho | Androidsis
Nuqul Smart ah: codsi siinaya xulashooyin badan oo fudud oo Nuqul / Taabasho ah
Renata | | Codsiyada Android
Markii ugu horreysay ee aan aalad adeegsado Android, sida newbie kasta, ma aanan aqoon sida loo sameeyo nuqul oo dhaji qoraalka meel kasta oo uu wax ka akhrinayey. Dabcan waqti kadib waxaan bartay sida tan loo sameeyo mararka qaarna waxaa lagu sameyn karaa adoo farta ku garaacaya qoraalka fartaada dhowr ilbiriqsi hadii aysan taasi shaqeynayn waxaad sidoo kale riixi kartaa badhanka menu-ka si aad u hesho xulashooyinkan.
Markaad xulato qoraal aad nuqul ka sameyso oo aad dhajiso, waxyaabaha kale ee beddelka ah ee aad heysataa waa labadaas, wax kale ma jiraan. Maxaan u haysan karin wax intaa ka badan? Haa, way ku filan yihiin xaalado badan, laakiin maaddaama Android ay leedahay waddo dheer oo loo maro in nolosha laga dhigo mid aad u fudud, waxaa jira codsiyada sida Nuqul Smart ah, taas oo kuu ogolaaneysa inaad sameysid xulashooyinka aad ku nuqulan karto kuna dhajin karto qoraalka dhexdiisa qalabkaaga si aad uga taajirto.
Waxa ay qabato Nuqul Smart ah taasi waa marka aad xulaneyso qoraal aad rabto inaad nuqul ka sameysato, Soo-bixid ayaa u muuqata 4 ikhtiyaar: wadaag, raadin, tarjum iyo wax ka beddel.
Dabcan waa inaan ku rakibnaa arjiga laga heli karo Suuqa Android . Waxaan ka raadiyay Android 1.5 oo sida muuqata qoraallo duug ah lama heli karo, laakiin Froyo waa taas. Kaliya rakib nooca bilaashka ah (Waxa kale oo jira mid la bixiyay oo qiimihiisu yahay $ 0.99) waana intaas.
Markaad furto, waxaad heli doontaa daaqad sidan oo kale ah:
Waa inaad sax sanduuqa koowaad si codsigu u shaqeeyo meelkasta oo aad rabto inaad wax ka nuquliso. Aniga la ima xusin Markaa waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad tijaabiso oo aan wax kale jirin.
Ikhtiyaarka wadaagga ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dirto wixii aad soo guurisay adoo adeegsanaya Bluetooth, emayl, Facebook, Gmail, fariimaha qoraalka, Twitter, iyo barnaamijyada kale ee warbaahinta bulshada aad hayso, sida Tumblr ama MySpace. Xulashada raadinta, si fudud u isticmaal Google si aad u raadiso (u cafi mudnaanta) qoraalka aan soo guuriyay. Tarjumaadda ayaa kala soocaysa luqadda uu qoraalka kujiro, kaliya hadaad sidan oo kale kuhesho qaabeynta bilowga ah ee Smart Copy, taas oo ah sida ay ugu timaado asal ahaan; waxay leedahay 34 xulasho luqadeed oo la turjumo. Ugu dambayntiina, ikhtiyaarka tafatirka, waxa ay sameyso ayaa ah in daaqad iyo kumbuyuutarka ay kuu muuqdaan si aad meesha uga saarto ama aad ugu darto waxaad rabto.
Maxaan jeclaan waayey?
Ma jiro ikhtiyaar "baajin" marka aadan rabin inaad isticmaasho Smart Copy. Si tan loo sameeyo waa inaad riixdaa badhanka soo celinta.
Haddii, tusaale ahaan, aad gujiso ikhtiyaarka tarjumida laakiin waxa aad dooneysay ay ahayd in lala wadaago, waa inaad dib u noqotaa (maaddaama uusan jirin wax baajin) oo aad nuqul ka sameysid qoraalka mar kale maxaa yeelay kuu oggolaan maayo inaad xulasho kale doorato inta kor ayaa saaran
Astaamaha pop-up ma laha aqoonsi, taasi waa, ka hooseysa iyaga umana muuqato waxa ay yihiin. Waan ogahay in tani ay tahay wax yar oo doqon ah, laakiin waxaa jira kuwa ilooba (sida aniga oo kale) ama aan waligood ka baran astaan ​​astaan.
Daaqadda ay ku qoran tahay qoraalka la soo xulay ayaa aad u yar oo aan la weyneyn karin, marka way adag tahay in la akhriyo ama wax laga beddelo, haddii taasi ay tahay xulashada aan dooranay.
Guud ahaan, Nuqul Smart ah Waa ikhtiyaar wanaagsan in laga dhigo khibradda nuqul ama dhajinta qoraalka wax yar oo ka wanaagsan. ka socda websaydhka, macaamiisha fariinta ama meel kasta oo kale oo ka socda Android-keena, gaar ahaan sababtoo ah wadaagga iyo ikhtiyaarrada tarjumaadda ee mararka qaarkood aad loogu baahan yahay.
Nuqul Smart ah bilaash ah Android on AppBrain
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Nuqul Smart ah: codsi siinaya xulashooyin badan oo fudud oo Nuqul / Taabasho ah
Waad salaaman tahay, ma ogtahay nuucyada lacagta la bixiyo ee keena horumar?
Ku jawaab pabloandroid
Tani way fiicantahay, waxa xun ayaa ah in shabakada ay ku shaqeyso kaliya biraawsarka asalka ah ... Waxaan isticmaalaa xscope, mana ii shaqeyso
Ku jawaab foxi26
laakiin ma ogola in laga soo guuriyo qoraalka barnaamijyada twitterka ama facebook: S
Ku soo jawaab Pachecoretro
Google ayaa soo saartay cusbooneysiin ku saabsan Suuqa Android
Imo, dhammaan macaamiisha farriimaha ku wada jira hal